UZinnbauer ubuye ejabule iPirates ikhombisa ubuqhawe ezimeni ezinzima e-Angola - Impempe
UZinnbauer ubuye ejabule iPirates ikhombisa ubuqhawe ezimeni ezinzima e-Angola
Umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer, ubuye inhliziyo ithe kla e-Angola la ezakhe bezibhekene khona neSagrada Esparanca emdlalweni wazo wokuqala kwiCAF Confederation Cup ngoLwesibili ntambama.
IPirates iwine ngo 1-0, okuyibeka ethubeni elihle lokudlulela esigabeni esilandelayo salo mqhudelwano. Igoli leZimnyama lishaywe nguThembinkosi Lorch kanti uZinnabuer ulichaze njengelihle kakhulu.
Lo mqeqeshi odabuka eGermany uthe indlela abazikhandle ngayo abadlali bakhe imshiye echazekile.
“Yebo, bekuwumdlalo onzima kakhulu. Bekushisa kakhulu kanti nenkundla beyinotshani obude futhi ibhola libhampa kakhulu,” kusho uZinnbauer ngemuva komdlalo.
Nokho ngokuqhubeka komdlalo, iPirates ibe seyisijwayela isimo futhi yaqala ukuhlanganisa iminyakazo emihle. Ukube amathuba abawatholile bawasebenzisile, ikakhulukazi ngasekupheleni kwalo mdlalo, ngabe kukhulunywa okunye.
“Besilokhu siya ngokuba ngcono ngokuqhubeka komdlalo yize besidlala neqembu eliqinile impela futhi ebeligxile ekuvaleni emuva. Bebenamathela kumuntu bengasuki, okwenze kwanzima kubadlali bethu. Sinabadlali bekhethelo abadinga ukunikwa isikhala ngoba bathanda ukuya esitheni sebebijima nebhola, kanti uma kunendoda ehleli phezu kwakhe akakwazi kwenza lutho.
“Badlale kahle abafana bami, ikakhulukazi ngokuthola umphumela omuhle. Kube ngumphumela wokubambisana. Ngiyamhalalisela uLorch ngokushaya igoli elihle futhi elibalulekile. Bekufanele singangenelwa goli ekuhambeni.
“Lokho kubalulekile. Nokushaya igoli ekuhambeni kuyinto enhle kakhulu. Manje sesinethuba elihle kakhulu lokudlulela phambili,” kuchaza uZinnbauer.
EZimnyama zizobe sezikhohlwa yilo mdlalo, zigxile koweDStv Premiership ezizobhekana kuwo neMamelodi Sundowns ngoJanuwari 2.
“Ngemuva nje kukaKhisimuzi sizobe sesigxila emdlalweni weSundowns, kanti phakathi kwawo noweSwallows likhona owomlenze wesibili kuConfederation Cup. Nginethemba lokuthi sizoqhubeka nokwenza kahle,” kusho yena.
Previous Previous post: UHendricks uzophuthwa yithuba lokuyibamba kumaProteas koweTest azowudlala neSri Lanka ngoMgqibelo
Next Next post: IChippa isichithe uSeema yabuyisa umqeqeshi oyiqaqa eNingizimu Afrika